Paul's 2nd Letter to Timothy – 2माछा
घर / बाइबल / Epistles / Paul's 2nd Letter to Timothy
1:1 पावलले, परमेश्वरको इच्छा मार्फत येशू ख्रीष्टको प्रेरित, ख्रीष्ट येशूमा छ जो जीवनको प्रतिज्ञा संग अनुसार मा,
1:2 तिमोथीलाई, सबै भन्दा प्यारो छोरा. ग्रेस, कृपा, शान्ति, परमेश्वर पिताको देखि र ख्रीष्ट येशूको हाम्रा प्रभु देखि.
1:3 म परमेश्वरको धन्यवाद दिन, जसलाई म सेवा, मेरो पुर्खाहरूले जस्तै, शुद्ध अन्तस्करण. ceasing बिना म मेरो प्रार्थना तपाईं को सम्झनामा पकड लागि, रात र दिन,
1:4 तपाईं हेर्न इच्छा, आनन्द भरिएको गर्न ताकि तपाईंको आँसु सम्झँदा,
1:5 एउटै विश्वास आपत्ति गर्न कल, जो तपाईंलाई unfeigned छ, पनि पहिला आफ्नो हजुरआमा मा बास जो, Lois, र आफ्नो आमा मा, युनिस, र पनि, म केही हुँ, तिमीमा.
1:6 किनभने यो, म परमेश्वरको अनुग्रहको पुनर्जीवित गर्न admonish, जो तपाईंलाई मेरो हात को अँगाल्न हो.
1:7 लागि परमेश्वरले हामीलाई डर को एक आत्मा दिइएको छैन, तर सद्गुण को, र प्रेम को, र आत्म-संयम.
1:8 अनि त, हाम्रो प्रभुको गवाही को लज्जित छैन, मेरो न त, आफ्नो कैदी. बरु, परमेश्वरको सद्गुण संग अनुसार मा सुसमाचारको सहयोग,
1:9 जसले हामीलाई छुटकारा छ र उहाँको पवित्र व्यक्तिको पेशा हामीलाई भनिन्छ छ, हाम्रो काम अनुसार छैन, तर आफ्नै उद्देश्य र अनुग्रह अनुसार, जो ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई दिइएको थियो, समय को उमेर अघि.
1:10 र यो अब हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको रोशनी द्वारा प्रकट गरिएको छ, जो निश्चित नष्ट भएको छ मृत्यु, र जो पनि सुसमाचारको जीवन र अविनाशलाई उज्यालो छ.
1:11 यो सुसमाचार को, म एक प्रचारक नियुक्त गरिएको छ, र एक प्रेरित, र अन्यजातिहरूको शिक्षकको.
1:12 यस कारण, म पनि यी कुराहरू ग्रस्त. तर म अलमल्ल होइन. म विश्वास छ जसलाई मा लागि म, र म उहाँले मलाई के सुम्पियो संरक्षण गर्ने शक्ति छ भनेर केही हुँ, त्यो दिन निम्ति.
1:13 ध्वनि शब्दहरू तपाईं विश्वास मलाई सुनेको छ कि को प्रकार को लागि पकड र प्रेम ख्रीष्ट येशूमा छ.
1:14 पवित्र आत्मा मार्फत सुम्पिएको राम्रो रक्षा, जसले हामीलाई भित्र बस्छ.
1:15 यो थाहा: एशिया भएका सबै ती म बाट टाढा गरिएका छन् कि, जसलाई बीच Phigellus र Hermogenes छन्.
1:16 प्रभु Onesiphorus घरमा कृपा हुन सक्छ, उहाँले अक्सर मलाई ताजा छ किनभने, र उहाँले मेरो चेन लज्जित भएको छैन.
1:17 बरु, उहाँले रोम आइपुगेका थिए जब, उहाँले उत्सुकता मलाई खोजे र मलाई फेला.
1:18 त्यस दिन प्रभु देखि कृपा प्राप्त गर्न उहाँलाई प्रभु अनुदान सक्छ. र ऊ एफिससका मा मलाई ministered छ कति तरिकामा राम्रो थाहा.
2:1 र तपाईं को लागि रूपमा, मेरो छोरा, ख्रीष्ट येशूमा छ अनुग्रह द्वारा बलियो हुन,
2:2 र तपाईं धेरै साक्षी मार्फत मबाट सुनेका जो कुराहरू द्वारा. यी कुराहरू विश्वासी मानिसहरू प्रोत्साहन, त्यसपछि जो अरूलाई पनि सिकाउन उपयुक्त हुनेछ.
2:3 ख्रीष्ट येशूको एक राम्रो सैनिक जस्तै श्रम.
2:4 कुनै मानिस, परमेश्वरको लागि एक सैनिक रूपमा अभिनय, सांसारिक मामिलामा आफूलाई अल्मल्याउने, उहाँले उहाँलाई प्रसन्न पार्न सक्छ भनेर कसलाई उहाँले सिद्ध छ लागि.
2:5 त्यसपछि, पनि, जसले एक प्रतियोगिता मा प्रयासरत पहनाया छैन, उहाँले lawfully competed नभएसम्म.
2:6 पर्छ मेहनत गरिन् गर्ने किसानले उत्पादन साझेदारी गर्न पहिलो हुन.
2:7 म भन्दै छु के बुझ्न. लागि प्रभु दिनेछु तपाईं सबै कुरामा बुझ्न.
2:8 mindful हुन प्रभु येशू ख्रीष्टको कि, दाऊदको सन्तान जो छ, मरेका फेरि पुगेको छ, मेरो सुसमाचारका अनुसार.
2:9 म यो सुसमाचारको मा श्रम, एक अपराधीको जस्तै साङ्लाले बाँधेर गर्दा पनि. तर परमेश्वरको वचन छैन सीमाको छ.
2:10 म यस कारण लागि सबै कुरा सहन: को चुन्नु खातिर, ताकि तिनीहरूले, पनि, ख्रीष्ट येशूमा छ जो मुक्तिको प्राप्त हुन सक्छ, स्वर्गीय महिमा संग.
2:11 यो एक विश्वासी भन्दै छ: यदि हामी उहाँसित मरेका कि, हामी पनि उसलाई बस्नेछन्.
2:12 यदि हामी ग्रस्त, हामी पनि उसलाई शासन गर्नेछ. हामी उहाँलाई अस्वीकार भने, उहाँले पनि हामीलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्नेछ.
2:13 हामी अविश्वासी छन् भने, उहाँले विश्वासी रहिरहेमा: उहाँले अस्वीकार गर्न सक्षम छैन.
2:14 यी कुराहरूमा जिद्दी, प्रभु अघि testifying. शब्द बारे contentious नगर्नुहोस्, यो लागि श्रोताहरू उपसंस्करण तर केही लागि उपयोगी छ.
2:15 सही सत्य वचन ह्यान्डल छ जो एक सिद्ध र unashamed कामदारको रूपमा परमेश्वरको सामु आफूलाई प्रस्तुत को कार्य मा पांडित्याभिमानी हुन.
2:16 तर अपवित्र वा खाली कुरा जोगिन. यी कुराहरू लागि एक impiety मा निकै अघि बढाउन.
2:17 र आफ्नो शब्द एक क्यान्सर जस्तै सर्छ: यी बीचमा Hymenaeus र Philetus छन्,
2:18 जो पुनरुत्थानको पहिले नै पूरा भन्दै द्वारा सत्य टाढा खसेको छ. र त्यसैले तिनीहरू केही व्यक्ति को विश्वास subverted छ.
2:19 तर परमेश्वरको दृढ जग स्थितिमा रहिरहन्छ, यो छाप भएको: आफ्नै भएकाहरूलाई प्रभु थाह, र प्रभु को नाम थाहा सबै iniquity देखि प्रस्थान.
2:20 तर, एक ठूलो घर मा, त्यहाँ सुन र चाँदीको मात्र होइन जहाजहरु छन्, तर काठ को र माटो को ती पनि; र निश्चित केही सम्मान मा आयोजित गर्दै, तर अनादर अरूको.
2:21 यदि जो कोहीले, त्यसपछि, यी कुराहरू देखि आफूलाई शुद्ध हुनेछ, उहाँले सम्मान मा आयोजित एक पोत हुनेछ, प्रभुको पवित्र र उपयोगी, हरेक असल कामको लागि तयार.
2:22 त्यसैले त, आफ्नो युवा को चाहना भाग्न, अझै साँच्चै, न्याय पछि लाग्न, विश्वास, आशा, दान, र शान्ति, शुद्ध हृदय देखि प्रभु पुकारा गर्नेहरूलाई साथ.
2:23 तर मूर्ख र undisciplined प्रश्नहरू जोगिन, लागि यी कलह उत्पादन भनेर थाहा.
2:24 लागि प्रभुको सेवक contentious हुनु हुँदैन, तर यसको सट्टा उहाँले सबैलाई तिर नम्र हुनुपर्छ, teachable, बिरामी,
2:25 आत्म-संयम साथ सही सत्य प्रतिरोध गर्ने ती. लागि कुनै पनि समयमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई पश्चात्ताप दिन सक्छ, सत्य पहिचान गर्न ताकि,
2:26 र त्यसपछि तिनीहरूले शैतानको को पासोहरू देखि ठीक हुन सक्छ, जसलाई द्वारा तिनीहरूले आफ्नो इच्छामा कैद आयोजित छन्.
3:1 र यो थाहा: पछिल्लो दिनमा खतरनाक पटक नजिकै प्रेस हुनेछ.
3:2 मानिसहरू आफूलाई प्रेमीहरूलाई हुनेछ, लोभी, आत्म-उच्च पार्नमा देखाएको, घमण्डी, परमेश्वरको निन्दा, आमाबाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, गुन नमान्ने, दुष्ट,
3:3 स्नेह बिना, शान्ति बिना, आरोपकहरूलाई, unchaste, क्रूर, दया बिना,
3:4 traitorous, लापरवाह, आत्म-महत्त्वपूर्ण, मायालु खुशी थप परमेश्वरको भन्दा,
3:5 यसको सद्गुण अस्वीकार गर्दा पनि piety को उपस्थिति भएको. अनि त, तिनीहरूलाई जोगिन.
3:6 यी बीचमा लागि जो घरहरू भित्र पस्नु र टाढा नेतृत्व हुन्छन्, कैदीहरूलाई जस्तै, पाप संग बोझ मूर्ख महिलाहरु, जो विभिन्न इच्छा को माध्यम द्वारा दूर नेतृत्व गर्दै,
3:7 सधैं सिक्ने, अहिलेसम्म कहिल्यै सत्य ज्ञान प्राप्त.
3:8 र एउटै तरिका Jannes र Jambres मोशाले प्रतिरोध गर्ने, त्यसैले पनि यी सत्य प्रतिरोध हुनेछ, मानिसहरू मनमा भ्रष्ट, विश्वास देखि reprobates.
3:9 तर तिनीहरूले एक निश्चित बिन्दु परे अग्रिम छैन. उत्तरार्द्ध को मूर्खता लागि सबै प्रकट गरिनेछ, बस पूर्व को कि रूपमा.
3:10 तर तपाईं पूर्णतया मेरो सिद्धान्त comprehended छ, निर्देशन, उद्देश्य, विश्वास, धीरज, प्रेम, धैर्य,
3:11 persecutions, कष्ट; एन्टिओक मलाई भयो जस्ता कुराहरू, आइकोनियमबाट मा, र लिस्त्रामा मा; म persecutions कसरी सहेका, र कसरी प्रभु मलाई सबै देखि उद्धार.
3:12 र स्वेच्छाले ख्रीष्ट येशूको मा piety बस्ने सबै ती सतावट हुनेछ.
3:13 तर दुष्ट मानिसहरू र deceivers दुष्ट अग्रिम हुनेछ, erring र त्रुटि मा पठाउन.
3:14 यद्यपि साँच्चै, के तपाईं सिकेका र जो जो तपाईं सुम्पिएको छ ती कुरामा रहनुपर्छ. लागि तपाईँले सिकेका जसलाई देखि थाहा.
3:15 र, आफ्नो सानैदेखि, तपाईं पवित्र धर्मशास्त्र थाह छ, जो मुक्तिको तिर तपाईं निर्देशन गर्न सक्षम छन्, ख्रीष्ट येशूको छ जो विश्वास मार्फत.
3:16 सबै धर्मशास्त्र, ईश्वर-प्रेरित भएको भएको, शिक्षा को लागि उपयोगी छ, ताडना लागि, सुधार को लागि, र न्याय मा निर्देशन लागि,
3:17 ताकि परमेश्वरको मानिस सिद्ध हुन सक्छ, हरेक असल कामको लागि प्रशिक्षित गरिएको भएको.
2 तिमोथी 4
4:1 म परमेश्वरको सामु पुष्टि, र येशू ख्रीष्टको अघि, जो जीवित र आफ्नो फिर्ती र आफ्नो राज्य मार्फत मृत न्याय:
4:2 तपाईं जोडतोडले वचन प्रचार गर्नुपर्छ भनेर, सिजन र सिजन बाहिर: सच्याउनुभयो, बिन्ती, हप्काउनुभएको, सबै धैर्य र सिद्धान्त संग.
4:3 तिनीहरूले ध्वनि सिद्धान्त रहिरहनेछन् जब लागि त्यहाँ एक समय हुनेछ, तर सट्टा, आफ्नै इच्छा अनुसार, तिनीहरू शिक्षकहरू भेला हुनेछ, खुजली कान संग,
4:4 र निश्चित, तिनीहरूले सत्य टाढा आफ्नो सुनुवाइ हुनेछ, र तिनीहरूले Fables तिर बन्द गरिने.
4:5 तर तपाईं को लागि रूपमा, साँच्चै, सचेत हुन, सबै कुरामा laboring. एक इंजीलवादी को काम, आफ्नो सेवाको काम पूरा. आत्म-संयम देखाउन.
4:6 म पहिले नै टाढा थकित भइरहेको छु, र मेरो dissolution समय नजिक प्रेस.
4:7 म राम्रो लडाई लडेका छन्. म पाठ्यक्रम पूरा गरेको छ. म विश्वास संरक्षित छन्.
4:8 शेष लागि जाँदा, न्याय मुकुट मेरो लागि सुरक्षित गरिएको छ, एक जो प्रभु, को बस न्यायाधीश, त्यस दिन मलाई प्रस्तुत हुनेछ, र मलाई मात्र, तर आफ्नो फिर्ती गर्न तत्पर गर्नेहरूलाई पनि. चाँडै मलाई फर्कन हतारमा.
4:9 लागि Demas मलाई त्यागेर छ, यो उमेर प्रेम बाहिर, र तिनले थिस्सलोनिकीका लागि प्रस्थान गरेको छ.
4:10 Crescens गलातीयामा गएका छ; Dalmatia गर्न तीतस.
4:11 लूका एक्लै मेरो साथ छ. लिनुहोस् मार्क र तपाईं उहाँलाई ल्याउन; लागि उहाँले सेवकाईमा मलाई उपयोगी छ.
4:12 तर Tychicus म एफिसस पठाएको.
4:13 जब तपाईं फिर्ता, म त्रोआस मा Carpus संग बाँकी छ कि आपूर्ति तपाईं संग ल्याउन, र पुस्तकहरू, तर विशेष गरी parchments.
4:14 सिकन्दरले coppersmith मलाई धेरै दुष्ट देखाइएको छ; प्रभु उसको काम अनुसार उसलाई चुक्ता हुनेछ.
4:15 र तपाईं पनि उहाँको हुँदैन; लागि उहाँले कडा हाम्रो शब्दहरू प्रतिरोध छ.
4:16 मेरो पहिलो रक्षा मा, कुनै मलाई द्वारा उभिए, तर सबैले मलाई त्यागे. यो तिनीहरूको विरूद्ध गणना हुन सक्छ!
4:17 तर प्रभु मेरो साथ उभिएर मलाई बलियो, त्यसैले मलाई मार्फत प्रचार पूरा हुनेछ भनेर, र यति भनेर सबै अन्यजातिहरूको सुन्नेछ. र म सिंह को मुख मुक्त थियो.
4:18 प्रभु मलाई हरेक दुष्ट काम मुक्त छ, र उहाँले आफ्नो स्वर्गीय राज्य द्वारा मुक्तिको पूरा गर्नेछ. उहाँलाई सदासर्वदा महिमा हुन. Amen.
4:19 प्रिस्का अभिवादन, र अक्वीला, र Onesiphorus को घरेलू.
4:20 Erastus कोरिन्थका मा रहेका. र ट्रोफिमसलाई मैले Miletus मा बिरामी बाँकी.
4:21 जाडो अघि आइपुग्छन् गर्न हतारमा. Eubulus, र Pudens, र Linus, र क्लाउडिया, र सबै भाइहरूलाई तपाईं अभिवादन.
4:22 प्रभु येशू ख्रीष्टको आफ्नो आत्मा संग हुन सक्छ. तपाईं संग ग्रेस सक्छ हुन. Amen.